ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၆)
Posted by ညီလင်းသစ် au 22.4.12
ငါးမြစ်ချင်းတွေ မြင်တော့ မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားချင်လိုက်တာ။
မြတ်ကြည်တို့ ပုဂံသွားတုန်းကလည်း သံတဲမှာပဲ တည်းခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တွဲထားတဲ့ caption လေးတွေကို သဘောကျတယ်။
ငါးတွေ ကိုကြည့်ပြီး အပေါ်ကတစ်ယောက်ပြောသလိုပါပဲ
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသားတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ
ဖလန်နယ်အကျီဝတ်သူလေးတွေ တောင်သူလေးတွေကို ရေးထားတာ သဘောကျတယ်။
ကိုယ်တွေက မရောင့်ရဲနိုင်သေးတော့ အသက်မရှုမိအောင်ကို ပြေးကြ လုပ်ကြရတာပေါ့။
ကျေနပ်သဘောတွေကျလို့ ။ အဲဒီငှက်လေးကို ...စွေ့ ...လို့ ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ တစ်ချို့ အရပ်ကတော့ ...ဇွေ့ လို့ အသံထွက်ပြီးခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ညီအစ်မခုနစ်ဖေါ် ..ဆဲဗင်းစစ်စတာစ်လို့ လည်းခေါ်သေးတယ်။ အုပ်စုလိုက်နေတတ်ကြလို့ လေ။
ထားတဲ့ပုံရယ်။ ရုပ်သေးပုံရယ် သူ့ ရဲ့ ကက်ပ်ရှင်ရယ်။
အစ်ကိုရေ.. သဘောကျလိုက်လေခြင်း... ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပြပုံအစီအရီလေးက သေသပ်လိုက်တာ.. နောက်ရန်ကုန်ကိုလည်း လိုက်ခဲ့ပါဦးမယ်..း))
အကိုရေ ပဲတွေမြင်တော့ ငယ်ငယ်ကရွာမှာနေခဲ့တာ
ပဲနာမည်က ဘိုကိတ်ပဲနော်အကို ပဲထောင့်ရှည်ဟုတ်ဘူး:D
Kaung lite tar byar!
ဒီလို ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံမျိုးနဲ့ အေးအေးသာသာ နိုင်ပုံမျိုး သဘောကျတယ်ဗျာ.... တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်တွေ စာမေးပွဲတွေ (အိမ်မက်တွေ) ပစ်ချပြီး ခပ်အေးအေး နေလိုက်ချင်(သလိုလို)..ပဲဗျာ။
တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ်မှန်းသိသိပဲ မောင်ညီလင်းရေ။ ဓာတ်ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။
ဧရာဝတီရဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာအချိန်လေး တစ်ခေါက်ပြန်သွားလို့ ကြည့်ချင်သေးတယ်ကွယ်။
အားလုံးရဲ့ဧရာဝတီ အေးချမ်းစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
I always enjoy your posts especially travelling posts
which always have lots of stunning photos :)
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ. အခု မြန်မာပြည်ပို.စ်တွေကိုဖတ်နေရတာ ၊ပို.စ် တခုဖတ်ပြီးသွားတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားတယ်။ပို.စ်အသစ်တက်လာပြီဆိုရင် ပထမဆုံး အမြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် နောက်တခေါက်ကျတော. ဇိမ်နဲ.သေချာစိမ်ပြေနပြေ ပုံတွေကို စူးစိုက်ကြည်.တယ်၊ စာတွေကိုသေချာဖတ်တယ်။
ဒီပို.စ်မှာတော. အရင်ပို.စ်တွေလို စားစရာမပါတော. ပုံတွေကို သေချာပိုကြည်.ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ဖြင်. အရင်ပို.စ်တွေတုံးကလိုမျိုး ချဉ်ပေါင်ကြော်တို.၊ မန်ကျည်းရွက်သုတ်တို.မပါတော. နည်းနည်းတော. စိတ်သက်သာရာ ရသွားတာပေါ.လေ။ဒါတောင် ထနောင်းရိပ်အောက်က လှေကို တော်တော်ကြာ စိုက်ကြည်.မိပါသေးတယ်။ ကိုညီလင်းသစ်လဲ အဲ.ဒီလှေနားမှာ မနက်မနက်ဆို တ၀ဲလည်လည်လုပ်နေခဲ.မှာပေါ.နော် :)'
ပုံလေးတွေကလည်းကောင်း အရေးကောင်းကောင်း နဲ့ ဆိုတော့ ရွှေစင်ဦး တောင် တခေါက်လောက် ထပ်သွားချင်သေးတယ်..
အကိုရေ တကယ်ကိုဘဲ ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကို ကိုယ်ရောက်နေသလိုကိုခံစားပီးကြည့်ခဲ့တယ်အကို .
မနူဟာဘုရား မှာဘုရားသမိုင်းကာတွန်းစာအုပ် တွေမဝယ်ခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့။ မဝယ်တာဘဲကောင်းပါတယ်အကို။ အထဲမှာ သမိုင်းကအမှားကြီး။ မနူဟာဘုရား အဲလိုကျဉ်းကျပ်နေတာ အတိုင်းအထွာမှားလို့တဲ့။ ဘုရားသမိုင်းကိုဘာလို့ပြင်ရေးကြမှန်းမသိဘူး။ ပုဂံမှာအဲလို သမိုင်းအမှားစာအုပ်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောကြတယ်။
ငါးမြစ်ချင်းအပေါ် ခံစားပုံကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျာ၊း)
သံတဲက တည်းလို့ကောင်းတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါပဲ၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ ဓါတ်ပုံတွေကို နှစ်သက်လို့ ကျေးဇူးပါ၊
ပုံမှန်လာ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ မစံပယ်ချို ကလည်း ငါးတစ်ကောင်လုံး အသုံးချနည်းကို သတိရသူ ပဲလား..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ကျနော်တို့လို မြို့ပြက မွန်းကျပ်သူ တွေကတော့ သူတို့တွေရဲ့ အေးချမ်း၊ ရောင့်ရဲနိုင်မှုကို အားကျလို့ မဆုံးဘူး..၊
သြော်.. စွေ့ဆိုတာ သူ့ကိုခေါ်တာလား၊ နာမည်နဲ့ ငှက်နဲ့ မတွဲမိဘူး ဖြစ်နေတာ၊ စွေ့စွေ့ခုန်ပြီး သွားတတ်လို့ စွေ့လို့ ခေါ်တာလား မသိဘူးနော်၊ ဆဲဗင်းစစ်စတာ ဆိုတဲ့ နာမည်တော့ တခါမှ မကြားဖူးဘူးဗျ၊ အခု ပြန်စဉ်းစားတော့ ဟုတ်လိုက်တာ၊ ကျနော် သူတို့ကို တွေ့တိုင်း အုပ်စုလိုက် တွေ့ရတာ များတယ်၊ အခုလို ပြောပြပေးတာ တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ မအိုင်အိုရာလိုပဲ အမှောင်ထဲကနေ အလင်းကို ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို ကျနော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်..၊
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ လိုက်ခဲ့ လိုက်ခဲ့.. ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်..၊း)
အေးဗျာ၊ ကျနော်က ပဲတောင့်ရှည်လို့ပဲ ထင်နေတာဗျ၊း) အခုလို ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါပဲ၊ ကျနော် ပြင်လိုက်ပါပြီ၊
ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲက (သလိုလို) ဆိုတာလေး သဘောကျတယ်၊း) မြို့ပြလူတန်းစားက အဲဒီလို ဘဝတွေ အားကျစိတ်တဖက်၊ အိပ်မက်တွေ တဖက်နဲ့ပဲ အသက်ဆက်နေ ရမှာပဲ ထင်ပါရဲ့ဗျာ..၊
အမြဲပုံမှန် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အန်တီရေ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီကို ကျနော်တို့ပဲ ကာကွယ်ရမှာ ပါပဲ၊ အန်တီလည်း ချမ်းမြေ့သာယာပါစေဗျာ..၊
(Ma?)War So ...
Thank you so much for your appreciation and lovely comment !!
သေချာတာပေါ့ဗျာ၊ မနက်တိုင်း အဲဒီလှေကလေး နားမှာပဲ တဝဲလည်လည်ပေါ့..၊ လှေဦးဖက် လျှောက်လိုက်၊ ပဲ့ဖက် ပြန်လာလိုက်နဲ့..၊း) စာတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို အခုလိုမျိုး အသေးစိတ် ခံစား၊ အားပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ကောင်းတာပေါ့ အမရာ..၊ သွားသာ သွားဗျို့၊ ပြီးတော့ ခရီးကလည်း လာချင်ရင် အနီးလေးဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ မဟုတ်လား..၊း) ကျေးဇူး အမ..၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီမြွေက တမှောင့်၊ တော်သေးတယ်၊ မြွေပူရာ၊ ကင်းမှောင့် ဖြစ်မသွားလို့..၊း) အဆင်ပြေတဲ့ တနေ့ ရောက်နိုင်ပါစေ ညီမရေ..၊
ဟုတ်လား၊ အဲဒီ ကာတွန်းစာအုပ် အကြောင်းတော့ ကျနော်လည်း မကြားမိဘူးဗျ၊ နောက်တခါတော့ သွားကြည့်ဦးမယ်၊ ဘုရား ဂေါပကကလည်း ဘာဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုထားတာလဲ မသိဘူးနော်၊ မတူတဲ့ အမြင်တွေကို စဉ်းစားနိုင်အောင်လို့ များလား၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိသုကာ ပညာမှာ အဆင့်မြင့်နေတဲ့ ပုဂံခေတ်မှာ အတိုင်းအထွာ မှားတယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဖို့က ခပ်များများပါပဲ၊ အခုလို သိရတာ ကျေးဇူးပါ..။
စောင့်လိုက်ရတာ ကိုညီရယ် :D
ဟုတ်တယ်နော် ဟိုးတုန်းကရောက်ခဲ့ပြီး ကြားထဲမရောက်ဘဲ ခုမှရောက်သွားရင် ဆိုင်ကယ်သံတွေ ဆူညံနေတာ သိပ်သိတာတယ်။ အရင်ကဆို လမ်းမကြီးက စက်ဘီးလေးတွေနဲ့ပဲ တိတ်ဆိတ်နေတာ။ တခါတလေမှ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ လူစီးဘတ်စ်အသေးလေးတွေပဲရှိတာလေ။ ကိုယ်ပိုင်ကားဆိုတာလည်း ခပ်ရှားရှားပဲကိုး။ ကျမတောင် ထည့်ရေးထားသေးတယ်။ ကျန်တာတွေတော့ဘာမှအထွေအထူးမပြောလိုတော့ပါဘူး..ထုံးစံအတိုင်းအားလုံးလှ အားလုံးကောင်း... သံတဲရေးဗားဗြူးကလည်း လှ။ အလှအပဆိုတာကလည်း ခံစားတတ်မှ... ခံစားတတ်ဖို့ အခြေအနေကလည်းပေးဦးမှနော...
ပုဂံနဲ့ ဧရာဝတီအလှမှာ စီးမျောရင်း ကိုညီလင်းသစ်နဲ့အတူ ရန်ကုန်ကို လိုက်ခဲ့ပါပြီ...။ နောက်တပို့စ်မျှော်နေပါမယ်..။
ပို့စ်အသစ်ဘယ်တော့တက်မလဲလို့ စောင့်နေရလောက်အောင် အရေးအသားကလဲညက်... ဓါတ်ပုံတွေကလဲ ပီပြင်လွန်းတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ရေ... ဒီတခါလဲ စောင့်ရကျိုးနပ်လို့ ကျေနပ်မိပါတယ်... ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ပုဂံကို ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားကို ဒီပို့စ်တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ အလိုလိုရင်ထဲမှာ ခံစားလို့ရပါတယ်... လေးလည်းလေးစားမိပါတယ်... အပိုင်း(၇) ကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်လို့...
အရင်ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးတသသဖြစ်နေတုန်း... ဒီတစ်ပုဒ်ကျမှဘဲ ရသနဲ့အလွမ်းတွေ ပြောမပြတတ်အောင် တနင့်တပိုးခံစားလိုက်ရတယ်အစ်ကို....။
"လွတ်လပ်စွာ ဆက်လက်စီဆင်းပါ ဧရာဝတီ....."
စောင့်လိုက်ရတာ အပိုင်း (၆)ကို . ပုံတွေ အားရပါးရ ကြည့်သွားပါတယ်နော့. သြော် မုန့်ဟင်းခါး မုန့်ဟင်းခါး ........
ပုဂံအလှဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ရင်း ပုဂံရောက်သွားသလိုပါပဲ။
အညာဇီးထန်းလျက်ကြိုက်သည် .. မနူဟာဘုရားထဲက ရုပ်ပွားတော်က အသစ်ပြုပြင်ထားတာလား ညီလင်းရေ ...
ရန်ကုန်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာဧ။် ။
ပိုစ့်အသစ်လေးတင်မလားလို့ တနေ့နှစ်ခေါက်လောက် လာကြည့်ပါတယ် (ဘလော့ဂါ အားမှန်း မအားမှန်း အားမနာဘဲ)။ အခုတော့ ဖတ်ပြီးရင်ထဲမှာ လွမ်းကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါ ပုဂံပဲ။ ပုဂံရဲ့အရသာပေါ်အောင် ရေးသားနိုင်သလို ဓါတ်ပုံတွေကလည်း တကယ့်ကို လှပါတယ်ဗျာ။ နောက်နှစ် မတ်လဆို ပြန်တော့မယ်။ ပုဂံသွားဖြစ်အောင် သွားမယ်ဗျာ။
ပုံတွေသိပ်လှတာပဲ... ကိုညီလင်းသစ်ရယ်... ။ ရင်ထဲမှာ ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ချို့နဲ့ ပုဂံကထွက်၊ ဧရာဝတီမြစ်ပြင်ကျယ်ကိုဖြတ်ပြီး ပြန်သွားတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ ကျွန်တော်ပုဂံအကြောင်းကို သိဖို့ အတော်လိုသေးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ပုံတွေအရမ်းကောင်းတယ်အကို။ကျွန်တော်လည်းနောက် ၂လလောက်နေရင် မြန်မာကိုပြန်ရတော့မှာ။ဒါပေမဲ့ ပုဂံနဲ့ တောအလှမ်းဝေးနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်အကိုရာ။ရန်ကုန်
ရောက်ရောက်ခြင်း ပုဂံအကြောင်းတွေလိုက်ရှာဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ကျေးဇူးကိုညီ :)
Breakfast လှေလေးကိုသဘောကျတယ်... မြွေတော့ကြောက်တယ်ဟယ်...သေးသေးကြီးကြီး ...
ဒီတခေါက်ပြန်ဖြစ်ရင် ပုဂံကို ထပ်သွားလည်ချင်စိတ်
ဓာတ်ပုံတွေ တကယ်လှတယ်..အောက်ဆုံးပုံကို အကြိုက်ဆုံး..
ကိုညီ မြန်မာပြည်ပြန်သွားတာ တကယ့်ကို ပုံကောင်းတွေ ရတာပဲဗျာ .. ကြည့်ရင်းနဲ့ ငိုချင်သလိုတောင် ဖြစ်တယ် .. လှလွန်းလို့ ... အောက်ဆုံးပုံ အခိုက်ဆုံးပဲ
ပုဂံကို နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၈)နှစ်က။ အခု သွားချင်စိတ်တွေ တရွရွ ဖြစ်နေရပြီ။
ဧရာဝတီနဲ့ ပုဂံရဲ့ ဟန်ချက်ညီတဲ့ သဘာဝအလှမှာ မျောသွားရတယ်..။
ရိုက်ချက်တွေက အပီလန်းတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ..။ ပုဂံမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ တ၀ီဝီနဲ့ကိုတော့ ထိမ်းချုပ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကြာလာရင် သဘာဝအလှတွေ အိတ်ဇောငွေ့တွေထဲမှာ နစ်မြုပ်သွားမှာ စိုရိမ်မိတယ်။
ဒီပို့စ်ကို အခုမှ ပြန်လာဖတ်ရတယ်။ ကိုညီလင်း ဒီပို့စ်တင်တဲ့အချိန်တုန်းက မမေက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန့်တငံ့ငံ့ ကွန်နက်ရှင်ရယ် အလုပ်များတာရယ်ကြောင့် မဖတ်ခဲ့ရဘူး။ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရင်း အဆုံးနားရောက်လေ ရင်ထဲမှာ တနင့်တပိုး ခံစားရလေပဲ။
အဆုံးသတ်ချိန်မှာ ... မျက်လုံးတွေ ပူနွေး စိုစွတ်ေ၀၀ါးလို့သွားတယ်။
ကိုညီလင်း စာရေး သိပ်ကောင်းတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ပိုအသက်ဝင်ပြီး ပိုခံစားရတယ်။